Ixesha elizayo le-LATAM Airlines ngokwe-CEO uPeter Cerda
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » udliwano » Ixesha elizayo le-LATAM Airlines ngokwe-CEO uPeter Cerda
Airlines • uhambo ngomoya • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseChile zokuPhula • udliwano • Utyalo mali • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Matshi 12, 2021
Umphathi omkhulu we-LATAM Airlines
Umphathi omkhulu we-LATAM Airlines, uRoberto Alvo, uthetha ngokuthatha njenge-CEO yenqwelomoya yenqwelomoya eLatin America, ethe yabethwa kakhulu yi-COVID-19.
I-LATAM yaba yenye yeenqwelomoya ezili-10 ezinkulu emhlabeni kwaye ngokucacileyo yaba yimpumelelo kwilizwe liphela, kwanophawu lwehlabathi kushishino.
Uthatha njenge-CEO yenkampani ngexesha apho ubhubhane, i-COVID, iqala ukusasazeka nge-Asiya iye eYurophu.
Uthatha i-helm ye-LATAM, kwaye ngaphantsi kweenyanga ezimbini emva koko, ngoMeyi, ugcwalisa isahluko 11.
Kudliwanondlebe olubukhoma, uPeter Cerda we I-CAPA-Iziko loPhapho, uthetha noRobert Alvo, umphathi osandula ukubizwa weLATAM Airlines.
Ndonwabe kakhulu ngokwenza udliwanondlebe nenye yeenkokheli zokuhamba ngenqwelomoya eLatin American, URoberto Alvo, igosa eliyintloko leLATAM. Buenos dias Roberto, unjani?
Hola Peter, molo Peter, unjani? Kuyonwabisa ukukubona kunye novuyo lokuba lapha kubo bonke abantu abazokujoyina. Enkosi kwakhona.
Ke, mandiqale ngqo ngaphandle. Ndineentsuku ezimbalwa ezibaluleke ngokwenene apha. NgoSeptemba 2019, uyabhengezwa njenge-CEO entsha ye- [Enrique Cueto 00:01:03], ilivo, umntu oseke inqwelo moya yenkulumbuso kwingingqi. Uyindlalifa yokuphumelela inqwelomoya enkulu enkulu. Kwiinyanga nje ezimbalwa emva koko, uMatshi lusuku olukhulu kuwe. Uthatha njenge-CEO yenkampani ngexesha apho ubhubhane, i-COVID, iqala ukusasazeka nge-Asiya iye eYurophu. Uthatha i-helm ye-LATAM, kwaye ngaphantsi kweenyanga ezimbini emva koko, ngoMeyi, ukhona ukugcwalisa isahluko 11. Ayikho i-honeymoon ekhangayo kakhulu. Kwaye ukusukela ngoko, ibingunyaka omnye wemiceli mngeni engathethekiyo, hayi kwihlabathi liphela, kodwa kwinqanaba lommandla. ILatin America kunye neCaribbean zibethwe ngokukodwa. Uninzi lwemida yethu luvaliwe. Unjani lo unyaka kuwe? Kwaye uyazisola ngalo mhla kaSeptemba xa kwabhengezwa ukuba uza kuba yi-CEO elandelayo? Ngaba wakhe wacinga ukuba uya kuba kule ndawo ukuyo namhlanje?
Hayi, ndithetha ukuthi, okokuqala, kum, kulilungelo elikhulu ukuba nethuba lokuphumelela mhlawumbi i-CEO ebalaseleyo yokuba nomzi mveliso kwiLatin America. U-Enrique uchithe iminyaka engama-25 yobomi bakhe esakha i-LATAM ukusuka kwinqwelomoya encinci kakhulu ukuya kule nto iyiyo namhlanje. I-LATAM yaba yenye yeenqwelomoya ezili-10 ezinkulu emhlabeni kwaye ngokucacileyo yaba yimpumelelo kwilizwe liphela, kwanophawu lwehlabathi kushishino. Ke kum, ibingumthombo omkhulu webhongo ukuthatha i-helm, njengoko besesitshilo, kunye nokuzama ukwenza i-LATAM ibengcono. Kwaye ukugcwalisa ezo zihlangu zikhulu kakhulu, oko kukuthi luxanduva olukhulu.
Ewe, kwaye njengokuba ubutshilo, ngubani obenokwazi ukuba ngaphantsi kweentsuku ezingama-60 ndithathileyo, kuye kwafuneka ndiyise inkampani kwisahluko 11. Ndiyathetha, ayikhangeleki kakuhle kwi-CV yam xa ndisithi, “CEO, Ngaphantsi kweentsuku ezingama-60 bayithatha inkampani kwisahluko 11. ” Akubonakali kuhle. Kodwa lowo ibingunyaka omangalisayo, ngokunyaniseka. Ewe. Kwaye andizange ndikholelwe ukuba siza kuba kule ndawo sikuyo namhlanje. Ndicinga ukuba kuzo zonke iinkokeli kwishishini labo, silawula elona xesha linzima kuyo nayiphi na inkampani enokuba nayo ngaphandle kwexesha lemfazwe. Kodwa kwangaxeshanye, ibe ngamava amangalisayo. Kwaye ndonwabe kakhulu ukubona ukuba eli qela leenkampani likwazile njani ukuhamba kwezi meko zinzima kakhulu. Ndinebhongo kakhulu ngomntu ngamnye kubasebenzi abangama-29,000 abasebenza kwiLATAM. Kwaye ngesingekho apha ukuba bekungekho ngenxa yabo bonke abo. Kwaye ibe ngamava amahle okufunda, ndiyaqikelela, sonke.
Ke, ndonwabile nyhani ukuba lapha, nangona kuvakala kuyinto encinci kwaye ingaqhelekanga. Elinye lawona maxesha makhulu okukhokela inkampani kwezi meko zinzima kakhulu.
URoberto, siza kuchukumisa kwaye singene nzulu kwi-LATAM kwimizuzu embalwa. Masihlale nentlekele ixesha elide. Uyi-airline eyayine-COVID yangaphambili, ekupheleni kukaDisemba 2019, ngaphezulu kweenqwelo moya ezingama-330, wabhabha waya kumazwe angaphezu kwama-30, kwiindawo eziyi-145. Nge-COVID, ngokuvalwa kwemida yethu, sisukile kunxibelelwano lweedolophu ezili-1700 kumgangatho wengingqi kwihlabathi liphela saya kuma-640 ngo-Epreli, ethi ngokujika kwethu umthwalo, ngoku simalunga ne-1400 yonxibelelwano lwedolophu. Zonakalise kangakanani izithintelo ezibekwe kolu shishino, malunga nokuvalwa kwemida, ukuhlukaniswa kwamanyathelo ngoorhulumente, kube nzima kangakanani kuwe njengenqwelomoya ukuba ukwazi ukujongana nale ngxaki?
It [inaudible 00:04:49] ibe nguPeter obalaseleyo. NgoMatshi 11, sahamba ngeenqwelo-moya ezili-1,650 29. Ngomhla wamashumi amabini anesithoba ku-Matshi kunyaka ophelileyo, sasiphantsi kweenqwelo moya ezingama-50 ngosuku. Ke, iipesenti ezingama-96 zamandla angaphantsi kweentsuku ezingama-20. Ndicinga ukuba sonke sanyamezela. Kwaye sachitha iinyanga ezine phantse singasebenzi nto, ngaphantsi kwe-10% yamandla ethu. Kwaye kwingingqi ngokukodwa, ukubuyiswa kuye kwacotha xa kuthelekiswa neminye imimandla, kuthintelwe uninzi, njengoko watshoyo, ngoorhulumente abohlukeneyo. Mhlawumbi eyona nto inzima kukutshintsha kwezithintelo kunye nokusilela kobuchule ekufuneka abathengi bacwangcise konke, nazo zonke ezi meko zitshintsha. Ndicinga ukuba sonke siyakuxabisa ukudideka ekuhlaleni, oko kubalulekile kwaye kuyimfuneko. Kodwa ngelishwa, iseti yeemeko esizibonileyo apha, kwaye ngokuqinisekileyo nakwezinye iingingqi zehlabathi, ibinzima kakhulu kwiinqwelomoya.
Ndicinga ukuba ukubuyela kwimeko yesiqhelo, kwaye mhlawumbi siza kuthetha kancinci malunga nekamva, kuya kuba ngumceli mngeni kule mithetho. Kwaye kufuneka sicinge ngendlela esenza ngayo ukuba ishishini leenqwelo moya libuye ngokukhawuleza. Kwaye oorhulumente ngokuqinisekileyo baya kudlala indima ephambili apha.
Makhe sithethe kancinci malunga noorhulumente apha. Sinendawo enzima kakhulu. Kwingingqi yethu sihlala sihlaselwa ziimeko zentlalo, ezoqoqosho, nezopolitiko unyaka nonyaka. Ngaba oorhulumente bengingqi yethu benze ngokwaneleyo ukunceda ishishini ngeli xesha lobunzima?
Umbuzo onzima ukuwuphendula. Njengoko uyazi, asizange sifumane, kwingingqi, uncedo koorhulumente ukuba basinde kwaye bahlangulwe, njengeenkampani ezininzi kwi-Northern hemisphere. Kuyinyani nangona oorhulumente bethu behlwempuzekile. La ngamazwe ahluphekileyo [inaudible 00:06:37]. kwaye ndiyaqonda ukuba oorhulumente bajongene nenani elikhulu lemiceli mngeni kunye neemfuno. Kwaye lo ngummandla apho kukho abantu abaninzi abahluphekileyo. Kwaye ndiyasiqonda ngokupheleleyo isidingo sokuba bancedwe.
Ngoku sele ndithethile, ndiyakholelwa ukuba urhulumente usenokwenza okungaphezulu. Kwaye indlela oorhulumente abahamba ngayo kwiinyanga ezizayo njengoko ingxaki ngethemba lokuba iqala ukuthomalalisa izitofu, iya kuba yinto ephambili kwimpumelelo yeenqwelomoya ezibhabha kummandla okanye iinqwelomoya ezifuna ukubhabha zaya kwingingqi. Ndingathanda ukubona oorhulumente bethu bengingqi besebenza ngohlobo olulungelelanisiweyo. Ndicinga ukuba siyayidinga. Esi sisiqwenga esikhulu kakhulu sehlabathi. Kwaye ngelishwa, akukho nto ingako inokwenziwa ziinqwelomoya xa zibhabha xa ufuna ukuhamba. Iindlela asizizo ezinkulu. Sinenkqubo encinci kakhulu, encinci kakhulu yoololiwe kuloo mmandla. Ke, i-airline ngokuqinisekileyo iphambili ekuqinisekiseni ukuba unxibelelwano kwingingqi luhlala kwaye luyabuya, kwaye nophuhliso lwezoqoqosho oluza nalo luqinisekisiwe.
[inaudible 00:07:48], uthinte inqaku elibalulekileyo, isitofu sokugonya, nokuzisa ukuzithemba. I-LATAM [inaudible 00:07:53] ummandla wakho, ummandla, kungekuphela nje kwengingqi, kodwa nakwamanye amazwe. ILATAM izakudlala indima ebalulekileyo ekuziseni ezi zitofu eLatin America kwaye iziswe kuluntu olwahlukeneyo. Yintoni indima obuyidlala norhulumente? Bebesebenza njani oorhulumente kunye nawe? Kungenxa yokuba le yinzame ebaluleke kakhulu. Njengoko usitsho, asinaso isiseko esinokuthi sizise izitofu ngezinye iindlela zothutho. Kanye kwingingqi, kuya kufuneka ibe yindiza. Kwaye i-LATAM izakudlala indima ebaluleke kakhulu. Luhamba njani olo nxibelelaniso?
Ewe, sazisa phambili saza sanxibelelana nawo wonke urhulumente wommandla kwaye sabona ukuba zeziphi iindlela esinokunceda ngazo. Ndiyakuxelela nam, okwangoku, siye sathutha saya kwingingqi, eMzantsi Melika, phantse iidosi ezizizigidi ezingama-20 zokugonya. Eyona nto iphantse yazizo zonke izitofu eziziswe kummandla. Sizimisele ukunceda abahlali apho sisebenza khona kunye namazwe apho sisebenza khona ngokusasaza ngaphakathi ekhaya zonke izitofu abafuna ukuzifumana simahla. Okwangoku ngelixesha, sele sihambise ngaphezulu kwe-9 yezigidi zokugonya ekhaya. Kwaye sifikelele kwezona ndawo zikwindawo ekude kulo mmandla, njengePatagonia eChile, iziQithi zeGalápagos e-Ecuador kunye nehlathi lemvula iAmazonia ePeru naseBrazil. Ke, sinebhongo kakhulu ukuba, ndicinga ukuba, sibeka ingqolowa yetyuwa kule nzame kwaye siqinisekisa ukuba singayinceda inkqubo yokugonya ngokukhawuleza. Ke, ukuzibophelela kwethu koorhulumente apho sisebenza khona kukuqhubeka hayi kuphela izitofu zokuhambisa simahla, kodwa nabasebenzi bezonyango nayo nayiphi na into eyimfuneko ekuqinisekiseni ukuba oorhulumente banazo izixhobo zokulwa lo bhubhane woyikekayo.
Cofa kwiphepha elilandelayo ukuze uqhubeke nokufunda